Generation Z လူငယ်တစ်ဦးမှ ဦးရဲထွဋ်သို့မေးစာ – Shwe Myanmar
Generation Z လူငယ်တစ်ဦးမှ ဦးရဲထွဋ်သို့မေးစာ
Generation Z လူငယ္တစ္ဦးမွ ဦးရဲထြဋ္သို႔ေမးစာ
မဂ္လာပါ အန္ကယ္ ဦးရဲထြဋ္ခင္ဗ် …
အန္ကယ္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Gen Z လူငယ္မ်ားအား တာလီဘန္ဟုခိုင္းႏႈိင္းတာေတြ႕ရွိရ၍ အင္မတန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္ …သိုေသာ္ အန္ကယ္မွ တာလီဘန္ဟု ခိုင္းႏႈိင္းေသာ Gen Z လူငယ္ေလးမ်ား ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား အား အတိတ္တြင္လူပ္ေဆာင္မႈရွိခဲ့ပါသလားခင္ဗ်ာ။
1. ျပည္သူကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
2. ျပည္သူဆီက ဓနဥစၥာကို အဓမၼသိမ္းဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
3. ျပည္သူေတြကို မ်က္ရည္က်ေအာင္လုပ္ဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
4. ျပည္သူေတြအား အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းမႈမ်ိဳးလုပ္ဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
6. တစ္႐ႊာလုံးကို အကုန္လမ္းမေပၚဆြဲခ်ၿပီး တစ္႐ႊားလုံးကို မီးေလာင္တိုက္သြင္းဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
7. ဘာသာေရးရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ဘုရားဌာပနာ (ဥပမါ ပဲခူးစိန္ဖူးေတာ္) မ်ားအား ခိုးယူခဲ့ဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
8. ျပည္သူေတြရဲ႕ ဓနဥစၥာေတြကို ဖ်က္ဆီးဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
9. တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္သံယံဇာတအား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ အသုံးခ်ဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
10. လယ္သမားေတြဆီက ေျမသိမ္းဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
11. လက္နက္မဲ့ ျပည္သူကို ေသနတ္နဲ႔ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ပစ္ဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
12. တိုင္းျပည္ ဘ႑ာကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္အသုံးခ်ဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
13. စစ္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမပ်ိဳေလးမ်ား အား အတင္းအဓမၼက်င့္ဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
14. ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လာဘ္စားဖူးပါသလားခင္ဗ်ာ။
ေမးစရာေမးခြန္းေတြက တစ္အားမ်ားပါတယ္။ အန္ကယ္သမုတ္တဲ့ တာလီဘန္လို႔ေခၚတဲ့ Gen Z လူငယ္ေလးေတြက အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားမွ လုပ္ဖူးတာရွိရင္ ေထာက္ျပေပးပါခင္ဗ်ာ။ ယခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈသည္ Gen Z လူငယ္မ်ားမွ ဆူပူလို႔ ျဖစ္ေနတာလား။ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူကို လက္နက္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက မတရားဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ေနလို႔ ျဖစ္တာလား အန္ကယ့္မွာ ျပည္သူထဲက
ျပည္သူဆိူတဲ့ ႏွလုံးသားနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ေသနတ္ျပၿပီးသိမ္းယူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက်ေတာ့ ေဝဖန္မႈမ်ိဳးမေတြ႕ရဘဲ။ လူငယ္ေလးေတြက ဘယ္သူမွမခိုင္း ကိုယ့္အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ Boycott လုပ္တာ CDM
လုပ္တာေတြကို အားေပးျခင္း ေထာက္ခံတာေတြက လူငယ္ေတြ တာလီဘန္ျဖစ္သြားေရာလားခင္ဗ်။ ဒီလိုလုပ္တာ တိုင္းျပည္အတြက္ထိခိုက္မႈရွိတယ္ထင္ရင္ Covid ေၾကာင့္ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးယိုင္နဲ႔ေနခ်ိန္မွာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာက တိုင္းျပည္အတြက္ထိခိုက္မႈရွိတယ္မထင္ဘူးလားခင္ဗ်။
လူငယ္ေတြလက္နက္ကိုင္တာ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ဆိူတာ အန္ကယ္ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိရင္သိႏိုင္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြက အေၾကာင္းမဲ့လက္နက္ကိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘူးဆိူတာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကိုၾကည့္ရင္ အန္ကယ္သိႏိုင္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ Gen Z လူငယ္ေတြက ျပည္သူကိုထိခိုက္သြားေအာင္ ယခုလည္းမလုပ္သလို ေႏွာင္အနာဂတ္တြင္လည္းလုပ္ဖို႔
စိတ္ကူးမရွိပါေၾကာင္း။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ဗုံးေပါက္ကြဲမႈေတြ ေဈးမီးေလာင္မႈေတြက ကြၽန္ေတာ္တိူ႔ Gen Z လူငယ္ေတြ၊ လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ PDF အဖြဲ႕ေတြက ဘယ္ေသာအခါမွမလုပ္ေၾကာင္း။ လုပ္ခဲ့ရင္လည္း
ကြၽန္ေတာ္တိူ႔ Gen Z လူငယ္ေတြမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ကိုေခ်ာက္ထဲက်ေအာင္ တြန္းပို႔ေနတယ့္ Main institution တစ္ခုရဲ႕လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအာဏာသိမ္းမႈကိုၾကည့္ရင္ စစ္တပ္သည္ တိုင္းျပည္ေပၚ ႏွမ္းေစ့တစ္ေစ့မွ်ေလာက္ ေစတနာမရွိတာကို အန္ကယ္ေတြ႕ႏိုင္ ျမင္ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြက ဘာမွေတြးတတ္တာမဟုတ္ဘူး အားေန ဂိမ္းကစားေနတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲလို႔ အန္ကယ္တို႔ေတြးခဲ့ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခု revolution ၾကည့္ရင္ လူငယ္ေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိတာကိုေတြ႕ႏိုင္သလို ႏိုင္ငံ့အေရးအတြက္ဆိုရင္လည္း အသက္ေပးဖို႔ ဝန္မေလးဘူးဆိုတာကို ေပးဆပ္လိုက္ရတဲ့
လူရွစ္ရာေက်ာ္ၾကည့္ရင္ အန္ကယ္တို႔ သေဘာေပါက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ယခု Spring Revolution မွာ ဘယ္သူမွဦးေဆာင္သူမရွိသလို ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမရွိဘဲ ျပည္သူေတြထြက္လာတာကို အန္ကယ္ေတြ႕ႏိုင္မယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြက ျင္မ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနတာကို စတင္အၾကမ္းဖက္တာ စစ္တပ္နဲ႔ရဲပါ။ ကေလးလူငယ္ လူႀကီးမေ႐ြးပစ္သတ္၊ ေဈးမီးရႈိ႕လိုက္ လုပ္ေနတဲ့ institution ကိုေဝဖန္မႈမရွိဘဲ လူငယ္ေတြကို တာလီဘန္လို႔ေျပာေနတဲ့ အန္ကယ္စကားအတြက္ အန္ကယ္လိပ္ျပာလုံပါေစ။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ဖို႔ အသက္ေပးဖို႔ ဝန္မေလးတာ လူငယ္ေတြပါ”
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ဖို႔ အိပ္မက္ေတြကို စြန႔္လႊတ္ရဲတာ လူငယ္ေတြပါ”
အေရးေတာ္ပုံေအာင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ လုပ္ေနတာ လူငယ္ေတြပါ”
ေလးစားစြာျဖင့္ လူငယ္ထဲမွ လူငယ္တစ္ဦး
မဂ်လာပါ အန်ကယ် ဦးရဲထွဋ်ခင်ဗျ …
အန်ကယ်မှ ကျွန်တော်တို့ Gen Z လူငယ်များအား တာလီဘန်ဟုခိုင်းနှိုင်းတာတွေ့ရှိရ၍ အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည် …သိုသော် အန်ကယ်မှ တာလီဘန်ဟု ခိုင်းနှိုင်းသော Gen Z လူငယ်လေးများ အောက်ပါအကြောင်းအရာများ အား အတိတ်တွင်လူပ်ဆောင်မှုရှိခဲ့ပါသလားခင်ဗျာ။
1. ပြည်သူကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
2. ပြည်သူဆီက ဓနဥစ္စာကို အဓမ္မသိမ်းဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
3. ပြည်သူတွေကို မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်ဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
4. ပြည်သူတွေအား အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုမျိုးလုပ်ဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
6. တစ်ရွှာလုံးကို အကုန်လမ်းမပေါ်ဆွဲချပြီး တစ်ရွှားလုံးကို မီးလောင်တိုက်သွင်းဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
7. ဘာသာရေးရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဘုရားဌာပနာ (ဥပမါ ပဲခူးစိန်ဖူးတော်) များအား ခိုးယူခဲ့ဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
8. ပြည်သူတွေရဲ့ ဓနဥစ္စာတွေကို ဖျက်ဆီးဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
9. တိုင်းပြည်ရဲ့ မြေပေါ်မြေအောက်သံယံဇာတအား အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် အသုံးချဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
10. လယ်သမားတွေဆီက မြေသိမ်းဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
11. လက်နက်မဲ့ ပြည်သူကို သေနတ်နဲ့ တစ်ကြိမ်လောက်ပစ်ဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
12. တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အသုံးချဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
13. စစ်ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း မိန်းမပျိုလေးများ အား အတင်းအဓမ္မကျင့်ဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
14. ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် လာဘ်စားဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
မေးစရာမေးခွန်းတွေက တစ်အားများပါတယ်။ အန်ကယ်သမုတ်တဲ့ တာလီဘန်လို့ခေါ်တဲ့ Gen Z လူငယ်လေးတွေက အထက်ပါ မေးခွန်းများမှ လုပ်ဖူးတာရှိရင် ထောက်ပြပေးပါခင်ဗျာ။ ယခုအချိန်မှာ နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုသည် Gen Z လူငယ်များမှ ဆူပူလို့ ဖြစ်နေတာလား။ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူကို လက်နက်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက မတရားဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်နေလို့ ဖြစ်တာလား အန်ကယ့်မှာ ပြည်သူထဲက
ပြည်သူဆိူတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ကြည့်ရင် မြင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော် အာဏာကို သေနတ်ပြပြီးသိမ်းယူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကျတော့ ဝေဖန်မှုမျိုးမတွေ့ရဘဲ။ လူငယ်လေးတွေက ဘယ်သူမှမခိုင်း ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ Boycott လုပ်တာ CDM
လုပ်တာတွေကို အားပေးခြင်း ထောက်ခံတာတွေက လူငယ်တွေ တာလီဘန်ဖြစ်သွားရောလားခင်ဗျ။ ဒီလိုလုပ်တာ တိုင်းပြည်အတွက်ထိခိုက်မှုရှိတယ်ထင်ရင် Covid ကြောင့်နိုင်ငံ့စီးပွားရေးယိုင်နဲ့နေချိန်မှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာက တိုင်းပြည်အတွက်ထိခိုက်မှုရှိတယ်မထင်ဘူးလားခင်ဗျ။
လူငယ်တွေလက်နက်ကိုင်တာ ဘယ်သူ့ကြောင့်ဆိူတာ အန်ကယ် တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေက အကြောင်းမဲ့လက်နက်ကိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိူတာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုကြည့်ရင် အန်ကယ်သိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Gen Z လူငယ်တွေက ပြည်သူကိုထိခိုက်သွားအောင် ယခုလည်းမလုပ်သလို နှောင်အနာဂတ်တွင်လည်းလုပ်ဖို့
စိတ်ကူးမရှိပါကြောင်း။ ယနေ့အချိန်တွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ ဈေးမီးလောင်မှုတွေက ကျွန်တော်တိူ့ Gen Z လူငယ်တွေ၊ လူငယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေက ဘယ်သောအခါမှမလုပ်ကြောင်း။ လုပ်ခဲ့ရင်လည်း
ကျွန်တော်တိူ့ Gen Z လူငယ်တွေမဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်ကိုချောက်ထဲကျအောင် တွန်းပို့နေတယ့် Main institution တစ်ခုရဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုအာဏာသိမ်းမှုကိုကြည့်ရင် စစ်တပ်သည် တိုင်းပြည်ပေါ် နှမ်းစေ့တစ်စေ့မျှလောက် စေတနာမရှိတာကို အန်ကယ်တွေ့နိုင် မြင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေက ဘာမှတွေးတတ်တာမဟုတ်ဘူး အားနေ ဂိမ်းကစားနေတဲ့သူတွေချည်းပဲလို့ အန်ကယ်တို့တွေးခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ယခု revolution ကြည့်ရင် လူငယ်တွေ နိုင်ငံရေးမှာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိတာကိုတွေ့နိုင်သလို နိုင်ငံ့အရေးအတွက်ဆိုရင်လည်း အသက်ပေးဖို့ ဝန်မလေးဘူးဆိုတာကို ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့
လူရှစ်ရာကျော်ကြည့်ရင် အန်ကယ်တို့ သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ယခု Spring Revolution မှာ ဘယ်သူမှဦးဆောင်သူမရှိသလို သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘဲ ပြည်သူတွေထွက်လာတာကို အန်ကယ်တွေ့နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေက ြင်မ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတာကို စတင်အကြမ်းဖက်တာ စစ်တပ်နဲ့ရဲပါ။ ကလေးလူငယ် လူကြီးမရွေးပစ်သတ်၊ ဈေးမီးရှို့လိုက် လုပ်နေတဲ့ institution ကိုဝေဖန်မှုမရှိဘဲ လူငယ်တွေကို တာလီဘန်လို့ပြောနေတဲ့ အန်ကယ်စကားအတွက် အန်ကယ်လိပ်ပြာလုံပါစေ။
“အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ အသက်ပေးဖို့ ဝန်မလေးတာ လူငယ်တွေပါ”
“အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ အိပ်မက်တွေကို စွန့်လွှတ်ရဲတာ လူငယ်တွေပါ”
အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ လုပ်နေတာ လူငယ်တွေပါ”
လေးစားစွာဖြင့် လူငယ်ထဲမှ လူငယ်တစ်ဦး
မြန်မာပြည်အတွက် နိမိတ်ကောင်းတွေပြဘိုက်တဲ့ ယောဒေသက ဗောဓိပင်တစ်ပင်လုံး ကန်တော့ထိုးနေပြီ
ယနေ့ခေတ်မိန်းကလေးများကို ပညာသားပါပါထောက်ပြလိုက်တဲ့ ကလေးလေး
အလှူခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကို သူအင်တာနက်သုံးဖို့တောင် ဘ ယ် လို ဒု က္ခ ခံ ရ ကြောင်း ဗီဒီယိုနဲ့တကွသက်သေပြလိုက်တဲ့ P D F လူငယ်တစ်ဦး
တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကို ရက်သားအရွယ်မှာပင် စတင်ပြီးအမွေအဖြစ် လက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ သမီးချောလေး ကိန္နရီရွှေစည်
သီလရှင်ကို အမျိုးသားတွေ ရှိခိုးသင့်ပါသလား?
ATM Card တွေကို Saving Accနှင့် ချိတ်ထားရင် မနက်ဖြန်ကစပြီး ငွေထုတ်လို့မရ တော့ကြောင်း ဗဟိုဘဏ် ညွန့်ကြားစာထုတ်
Jun 21, 2021 Shwe Myanmar